केपी–माधव मिल्दा बादललाई धोका – Suchana Sanjal
केपी–माधव मिल्दा बादललाई धोका
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ०४, २०७८ समय: २२:१८:५२
नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व समाधानको दिशातर्फ अघि बढ्दा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ वा डा. खिमलाल देवकोटामध्ये एकजनाले धोका पाउने निश्चित थियो ।
बादल नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् भने डा. देवकोटालाई एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले उम्मेदवार बनाएको हो ।
देवकोटालाई काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले समेत समर्थन जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म एमालेभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
तर, पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका पाँच–पाँच सदस्यसहितको कार्यदल बनाइएको छ ।
त्यसो त, एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरु बादलको तुलनामा पार्टीमा खिमलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
तर, नेकपा खारेजपछि माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका बादललाई तत्कालीन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निकै महत्त्व दिए ।
यतिबेला ओलीका सामु पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ । यसका लागि बादलको तुलनामा ओलीका लागि माधवकुमार नेपाल पक्षको भूमिका स्वाभाविकरुपमा महत्त्वको विषय बनेको छ ।
त्यसैले पनि ओलीले खनाल–नेपाल पक्षलाई देवकोटाको समर्थनबाट हात झिक्न दबाब दिएर पार्टी एकताको प्रयासलाई बिथोल्न नचाहने जानकारहरु बताउँछन् ।
बादल पराजित भएको अवस्थामा ओलीले सरकारमा नयाँ गृहमन्त्री खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जगतबहादुर बोगटी राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था मिल्न खोज्छ ।
त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका पछाडि माधव नेपालसँग सीपी मैनाली पक्षधरले विद्रोह गरेका थिए ।’
मतदाताहरुको समीकरण हेर्दा उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै गठबन्धन कायम रहेमा बादल कमजोर देखिन्छन् ।
तर, एमाले एक भएर उभिएको अवस्थामा भने उनको जित लगभग निश्चित देखिन्छ ।
मंगलबार रामबहादुर थापा बादल भोट माग्नका लागि कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको निवासमा पुगेका थिए ।
त्यहाँबाट फर्केपछि बादलका सहयोगी किरण भट्टराईले माधव नेपालले बादललाई मत दिने सहमति जनाएको दाबी गरे ।
Last Updated on: May 18th, 2021 at 10:18 pm